28 Dec, 2018 - 00:12	 2018-12-27T07:38:38+00:00 2018-12-28T00:03:55+00:00 0 Views
MAKADII henyu veKwayedza? Iiii ndinokutendai nechirongwa chenyu, ndiri kufara ndakamuwana wangu saka kune vese vari kufona pa0782 688 238 ngavachirega kufona.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 30, kumusha ndekwaRusape uye ndinogara muguta reHarare. Ndiri driver, ndinotsvaga musikana ane makore 18 . Andida ngaandibate pa0714 248 355.
Ini ndiri mukadzi ane makore 24 nevana vaviri, ndinotsvakawo murume wekushamwaridzana naye. Nhare yangu 0784 648 873.
Makadini veKwayedza? Ndiri kutsvakawo mukadzi wekuroora ane makore 30 zvichidzika. Ngaave ari pachokwadi uye ane rudo zvakanyanya. Nhare yangu 0773 514 250.
Makadini zvenyu? Ndiri murume ane makore 38 ndinotsvakawo mukadzi wekuroora. Ngaave akatsvindika pane zvose. Sunungukai kundibata pa0773 514 250.
Ndiri mudzimai ane makore 48 ndinotsvagawo shamwarirume. Ndinogara kuMudzi, ndinofara chose ndikawanawo anonamata. Nhare yangu 0718 763 115
Makadini? Ndiri murume ane makore 35, ndinotsvaga mukadzi wekuroora ane makore 25 zvichikwira. Ari serious anoziva Mwari anondibata pa0778 370 320.
Ndiri mukomana ane makore 32 ndotsvaga musikana ane makore 18 kusvika 26. Nhamba dzangu 0778 375 757.
Makaita basa veTishamwaridzane, ndakazomuwana wangu saka vese vaifona pa0735 553 164 chiregai henyu.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 35 nemwana 1, ndinotsvagawo murume anoda zvekuroora. Ndiri HIV positive, nhare yangu 0779 829 212.
Makadii? Ndodawo mukadzi wokuroora ane makore 30 zvichidzika ari pamushonga anoda zvemba. Nhare yangu 0771 849 893.
Makadini veKwayedza? Ndinogara Banket uye ndinodawo murume ari pamushonga. Ndine makore 29 nemwana 1. Andida ngaandibate pa0779 830 048.
Ndiri murume ane makore 32, ndotsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 25 – 30. Anoda ngaandibate pa0771 716 815. Ndatenda.
Makadii? Ndiri kutsvagawo musikana ari pachokwadi ane makore 25 zvichidzika. Ini ndine makore 27. Ndogara muHarare, nhare yangu 0771 075 060.
Makadini veKwayedza? Ndingafara mukashambadzawo yangu tsamba. Ini ndiri mukadzi ane makore 40, ndinotsvakawo murume ane makore 47 zvichienda mberi. Ndatenda. Vanoda vanondibata pa0773 922 713.
Makadini? Ndiri murume anonamata ane makore 47 uye ndiri negative. Ndinotsvagawo mukadzi ane makore 18 kusvika 40 ari muHarare neChi-town. Anoda anondibata pa0779 182 381.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 19 nemwana mumwe, ndinotsvakawo murume ava kuda zvemusha akanaka anofarira kugeza anoshanda uye ane makore 25 kusvika 30. Ndinobatika pa0717 623 205.
Ndine makore 26 uye ndinotsvagavo musikana ane makore 23 zvichidzika ari kudawo zvemba. Ari pachokwadi anoda ngaandibate pa0783 521 082.
Makadii? Ndiri murume ane makore 39 HIV+ uye ndinotsvaga mukadzi. Handina mwana, andifarira nhare yangu 0775 316 821.
Makadii veKwayedza? Ndanzwa nekungonyorera kuchirongwa chino kasi handisati ndamuwawo. Ndiri mukadzi ane makore 21 nevana 2. Ndinotsvagawo murume ari pachokwadi wekugara naye. Nhare yangu 0714 317 155.
Makadii? Ndiri murume ane makore 46 ndinotsvaga mukadzi ari pamushonga anoda zvemba ane makore kubva 28 kusvika 40. Andifarira ngandibate pa0783 223 368.
Makadini veTishamwaridzane? Ndiri mudzimai ane makore 29 nevana vaviri, ndogara kuChinhoyi. Ndotsvakawo murume anoda zvemba, ngaave anotya Mwari ane mazirudo uye anonamata. Ndinoda ane makore 31 – 38, andifarira ngaandibate pa0716 097 004 asi vanoda zvekutamba musafona.
Ndinotsvakawo murume ane makore 50 asina mukadzi uye ane chokwadi. Zvimwe tichataura, nhare yangu 0717 879 038.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 23, ndinoda mhandara isati yaziva murume anopinda potsori chete. Ane makore 18 – 20, anotenderana nazvo. Nhare yangu 0771 967 228.
Ndiri murume ane makore 48, ndinotsvaka mukadzi anoda kuroorwa ane makore 30 zvichikwira. Ndinoshanda uye handisi pamushonga, anoda ngandibate pa0717 140 495.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mukomana ane makore 30. Ndinotsvagawo musikana kubva pamakore 25 zvichidzika. Zvakawanda tinotaura. Ndinoita basa remawoko. Nhare yangu 0785 675 149.
Ndiri murume ane makore 35 nevana 2. HIV positive uye ndogara muHarare. Ndoda mukadzi ane makore 24 kusvika 32. Ari muchokwadi ngaandibate pa0784 693 658.
Makadini veTishamwaridzane? Ndinotsvakawo mudzimai anoda kuvaka musha nemwoyo mumwe chete, anogeza uye ane rudo. Ndine makore 38 nevana 2. Andifarira ndibatei pa0715 560 746.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mudzimai ane makore 22, ndinotsvakawo murume anoda kuroora. Ndine vana 2 anodawo nezvangu ngaandibate pa0783 850 484.
Makasimba here veKwayedza? Ndiri murume ane makore 32, ndogara kwaRusape uye ndiri pamushonga asi handiratidzike. Ndinoita basa remawoko nekurima. Ndotsvagawo mukadzi anoda imba wekuvaka imba naye chero ane mwana kana asina ane makore 18 zvichienda mberi kusvika 32. Ngaave ari pachokwadi, ari padhuze neRusape. Andida anondifonera kana sms totaura pa0785 488 142.
Makadii? Ndiri musikana ane makore 24, ndotsvagawo murume ane makore 27 kusvika 35. Nhamba yangu 0784 334 206.
Makadii? Ndiri kutsvakawo mukadzi akanaka ane zvaanoitawo. Ini ndiri giant, vakadzi vanonwa nekuputa musatambise henyu masms enyu. Nhamba dzangu 0779 947 917.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 32 nevana 3, ndotsvagawo murume ane makore 35 kusvka 40 ari pachokwadi. Anoda kuvaka musha ngaandibate pa0778 283 409.
Makadii veKwayedza? Ndiri musikana ane makore 19, ndotsvagawo mukomana ane makore 22 kusvika 25. Ave kuda zvemba ngaandibate pa0777 162 590.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mukadzi ane makore makumi matatu. Ndinotsvagawo shamwarirume kubva pamakore makumi mana zvichikwira. Ndiri muHarare, nhare yangu 0779 288 413.
Ndiri murume ane makore 39, ndoda mukadzi akavimbika asina chirwere. Nhamba yangu 0782 668 964.
Ndiri murume ane makore 39. Ndinodawo mudzimai anoda zvemusha ane makore 32 zvichidzika. Ngaave asiri pamushonga, zvakawanda tinozotaura. Ndinobatika pa0713 990 216.
Ndiri HIV positive, ndine makore 42 uye ndinoda mukadzi kunyanya mupurisa kana musoja. Chero anoshanda rimwe basa ngaandibate pa0714 771 919.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 31 nemwana mumwe chete. Ndinodawo mukadzi ane mwana kana asina ane makore 19 kusvika 25 anoda zvekuvaka imba kwete kutamba. Nhare yangu 0714 665 643. Ndiri muHarare uye handina hangu chirwere.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 30, ndinotsvakawo musikana wekushamwaridzana naye ane makore 18 – 23 anobva kwaMurehwa. Anoda ngaandibate pa0739 988 447.
Makadii? Ndiri murume ane makore 28 nemwana mumwe chete, ndodawo mukadzi ane mwana kana asina ane makore 20 kusvika 25. Asina chirwere seni ngaandibate panhare yangu 0719 483 405.
Makadii? Ndiri murume ane makore 30 nemwana mumwe chete uye ndiri kudawo mukadzi ane mwana kana asina. Ngaave anoda zvemba anogeza uye asina chirwere seni ane makore 19 kusvika 25. Nhare yangu 0719 483 405.
Ndiri murume ane makore 40 nevana 3, HIV positive asi handirakidzike. Handishande ndoita mabasa emaoko, ndiri kuda mukadzi anozodawo kunamata. Ini ndinoenda kumasowe. Nhare yangu 0774 972 620.
Ndiri mukomana ane makore 35, HIV negative uye ndinotsvaga musikana kana mukadzi wechidiki anoteerera akauimbika zvakanaka. Ndibatei panhare yangu 0778 105 473.
Ndiri mukadzi ane makore 24 nemwana 1, ndodawo murume ane makore 30 kusvika 32 asiri pamushonga uye anoshandawo. Nhamba dzangu 0771 432 247.
Ndiri mukomana munaku ane makore 21 okuberekwa uye ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 19 zvichidzika. Asiri pamushonga andifarira ngaandibate pa0712 124 830.
Makadini? Ndiri murume ane makore 38 nevana 2. Ndinotsvakawo mudzimai ane makore 28 zvichidzika ane mwana kana asina. Ane rudo uye akavimbika ndibate pa0719 514 250.